Akụkọ Blog nke Indian Akpadoro "Ahụike na Ọzụzụ" - THE INDIAN FACE
PRB SR S ANYUR NA-EGO
Cheta na onye nkuzi na-eme mmemme, wee na-emega ahụ! Anyị na-ahapụrụ gị usoro dị mma 5-usoro ka ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-azụ ahụ gị ma na-emeziwanye usoro sọfụfụ gị.
Ọzụzụ maka ndị na-arị arị
Ọ bụrụ n’ịgbaso usoro a oge oge (ị na -echekwa ihe niile) ọ ga-adịrị gị oke inweta ogwe rịgoro ma laghachi azụ na ịchọrọ ọtụtụ.
Mee usoro mmega ahụ tupu ị lakpuo ụra
Enweghị mgbatị ahụ? Nsogbu adịghị! Ọ bụrụ n’inweghị oge mmega ahụ n’ehihie, soro usoro a dị mfe n’abali tupu ị lakpuo ụra.
Otu esi ezere Office Syndrome
Ihe a na-akpọ syndrome office bụ mgbe ọtụtụ awa nọdụrụ n’ihu kọmputa. Ọtụtụ ndị na-ede, na -eme ma ọ bụ na-edezigharị ihe osise - na ihe omume ndị ọzọ - nwere ike ha agaghị elebara oge ha na-etinye n’ihu kọmputa ha. Chọpụta otu nke a nwere ike isi metụta ahụ gị na otu ị ga - esi zere ya!
Mmanụ a na-etinye na salmon Norwegian. Ntụziaka dị mma
Salmon abụrụla otu n'ime azụ azụ na-acha anụnụ anụnụ riri. Ọbụghị naanị maka ụtọ dị ụtọ ya, kamakwa maka afọ ojuju nke nri ya. Na mgbakwunye, ọ bụ nri enwere ike ịkwadebe n'ọtụtụ ụzọ n'ihi na ụtọ ya na-adaba n'ụzọ dị iche iche esi esi nri.
Achịcha Ahịhịa Ahụike Achịcha Na-enweghị Ntụ ọka
Mee nri na-atọ ụtọ ma ọ bụ nri nwere nri ndị a maka oatmeal na almọnd pancakes!
Ọtụtụ ndị mmadụ na-achọpụta ọghọm dị na nri ntụ ọka nwere ike inwe na mmetụta ha na ahụike, ọkachasị ndị mmadụ na-emebisi mmadụ na ndị na-adịghị anabata nri.
Akwara 10 na-agbatị gị iji malite usoro ọrụ gị
Anyị na-ewepụta usoro 10 ị na-ekwesịghị ichefu tupu ịmalite usoro mmega ahụ gị. Nke a ga - enyere aka mee ka uru ahụ gị dịkwuo elu tupu ịmịcha ha.
Ihe mmerụ ahụ na sịnịma na sọọdụ: ọ dị mma ịmara banyere ha mgbe niile
N’eme ihe egwuregwu sịnịma na sọọdụ: ọ dị mma ịmara ha n’oge etiti sịnịma, ị ka nwere ike ị na-eme njem nlegharị anya, were ụbọchị ole na ole na-anụ ụtọ snow na mmega ahụ. Ma ihe gị bụ egwuregwu ski ma ọ bụ ịgbaze mmiri, taa anyị chọrọ ịkọwa gị nkenke banyere […]
Kedu otu ị ga - esi kwekọọ na skai oge oyi a
Izu gara aga, anyị bipụtara otu akụkọ nke anyị jiri kerịta ndụmọdụ maka ndị na-amalite skade. Taa, anyị na-ewetara gị ọtụtụ usoro amamihe dị ka ị ga-esi nwee ọdịdị tupu ị na-aga skiing nke oge oyi a, nke bara uru maka ma ọ bụrụ na ọ nwere ndị ọhụụ. Iji malite, uru ahụ ị ga-arụ ọrụ kachasị bụ ndị […]